निगम र केयू बीच हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गर्न सम्झौता : RajdhaniDaily.com - निगम र केयू बीच हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गर्न सम्झौता
Home अर्थ निगम र केयू बीच हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गर्न सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल आयल निगम र काठमाडौं विश्वविद्यालय बीच हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गर्न सम्झौता भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ र ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा शैक्षिक संस्था र सरकारी निकायवीच सहकार्य वृद्धि गर्ने उद्देश्य सहित शुक्रबार निगम र केयुबीच एमओयूमा हस्ताक्षर भएको हो । एमओयुमा केयुबाट स्कुल अफ इन्जिनियरिङका डीन डा. डम्बरबहादुर नेपाली र निगमबाट निर्देशक दीपक बरालले हस्ताक्षर गरेका छन् । कार्यक्रममा निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेल र केयुका पूर्व रजिष्ट्रार डा. भोला थापाको उपस्थिति रहेको थियो ।
भारतबाट इन्धन खरिद गरी नेपाली बजारमा बिक्री गर्ने आयल निगमले एओयूपछि भने केयुको सहयोगमा नेपालमै इन्धन उत्पादन गर्दै निर्यात गर्नेसम्मको योजना बनाएको छ । यदि बिजुली खेर जाने अवस्था आए त्यसैबाट ‘हाइड्रोजन इन्धन’ उत्पादन गर्ने योजना रहेको केयु मेकानिकल इन्जिनियरिङ विभागका उपप्राध्यापक विराजसिंह थापाले बताए । ‘हाइड्रोजन इन्धन भविष्यको ऊर्जा र इन्धन हो । विकसित मुलुकहरुले गाडी, विमान, रेललगायतमा हाइड्रोजन इन्धन प्रयोग गरी परम्परागत इन्धनलाई विस्थापित गर्दै लगेका छन्,’ उनले भने, ‘नेपालसँग बिजुली भएकाले ग्रीन हाइड्रोजन इन्धनको उत्पादन गर्न सकिन्छ ।’ थापाले नेपालसँग बिजुली सरप्लस हुने तर, निगम भने भारतबाट इन्धन खरिद गरिरहने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्ने विषय एमओयूको महत्वपूर्ण पक्ष भएको बताए । यी सबै कार्यहरुलाई चाहिने प्राविधि, नीति निर्माण, पूर्वाधार, जनशक्ति र ज्ञानलगायतको पक्ष केयुले विकास र विस्तारमा गर्दै लैजाने उनले बताए ।
स्वदेशी स्रोतबाटै उत्पादित इन्धन र ऊर्जाको खपत नेपालमा हुन नसके निर्यात गर्नेसम्मको परिकल्पना गरिएको छ । केही समयअघि मात्रै ‘ग्रीन हाइड्रोजन ल्याब’ सञ्चालनमा ल्याएको केयुले अनुसन्धान र विकासका लागि आर्थिकरूपमा सबल कम्पनीको साथ खोजी गरिरहेको थियो । निगमसँग सहकार्य हुँदा प्रस्तावित योजनामा काम गर्न सहज हुने केयु प्राध्यापकहरूको भनाइ छ ।
सम्झौतापछि निगमले हाल सञ्चालन गरिरहेका सबै परियोजनाहरुमा आवश्यक पर्ने इन्जिनियरिङ परामर्श केयुले उपलब्ध गराउने बताइएको छ । केयुले आयल निगमको अटोमेसन, डिजिटलाइजेसन लगायतका पक्षमा समेत काम गर्ने सम्झौतामा उल्लेख भएको थापाले जानकारी दिए । केयुले निगमलाई आवश्यक पर्ने तालिमदेखि रिसर्च र पाठ्यक्रम विकासमा सहयोग गर्ने बताइएको छ । नेपाल भित्रै रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको अन्वेषण गरी पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन र वितरणमा सहकार्य गर्ने पनि समझदारी भएको छ ।
थापाले आयल निगम र केयुबीच इन्धन र ऊर्जा क्षेत्रमा पाँच वर्ष सहकार्यका लागि सम्झौता भएपनि प्रभावकारिता अनुसार सम्झौता नविकरण गर्दै लग्ने बताए । केयुले निगमकै स्रोतबाट यी परियोजना सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।
प्रदेश ३ डा. रमेशकुमार आचार्य, कोरोना संक्रमणका अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ - April 20, 2021 0
प्रमुख Dhruba Lamsal - February 16, 2021 0
Not-to-be-missed Kumar Raut - November 3, 2020 0
अन्तराष्ट्रिय Dhruba Lamsal - May 15, 2020 0
एजेन्सी । विश्वभर महामारीकारूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३ लाख नाघेको छ । २४ घण्टामा ५ हजार ३ सयको मृत्यु भएसँगै ज्यान...
प्रदेश Dhruba Lamsal - March 21, 2020 0
कालिकोट । जिल्लाको रास्कोट नगरपालिकाले कोरोना भाइरस संक्रमण हुन नदिन नगरपालिकाको प्रवेशद्धारमा स्वास्थ्य चेकजाँच सुरु गरेको छ । हेल्थडेस्कमा दैनिक ५०...
अन्तराष्ट्रिय Sushila Bishwokarma - December 12, 2020 0
अन्तराष्ट्रिय Sushila Bishwokarma - June 27, 2020 0